Tetikasa vaovao hanamora ny fitetezana an'i Israel, tsy hadino ary azo idirana
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Tetikasa vaovao hanamora ny fitetezana an'i Israel, tsy hadino ary azo idirana
Aogositra 22, 2018
Tetikasa fotodrafitrasa mampientam-po marobe no eo am-panaovana ny fizahan-tany israelana ho mora kokoa, tsy hay hadinoina ary mora azo.
Nandritra ny taona 2017 dia mpizahatany 3.6 tapitrisa no niditra Isiraely, fiakarana 25 isan-jato mihoatra ny 2016. Teo anelanelan'ny volana Janoary sy Jona 2018, fisoratana anarana mpizahatany 2 tapitrisa no voarakitra, fiakarana 19% tamin'io fotoana io tamin'ny taon-dasa. Ny toerana malaza indrindra dia i Jerosalema, Tel Aviv-Jaffa, ny Ranomasina Maty, Tiberiasy ary i Galilia.
Tetikasa fotodrafitrasa mampientam-po marobe no eo am-panaovana ny fizahan-tany israelana ho mora kokoa, tsy hay hadinoina ary mora azo. Mihabetsaka hatrany ny isan'ny fizahan-tany ary midika izany fa mila manamboatra ny lalao i Israel mba handraisana ny vahoaka.
Tetikasa fizahan-tany lehibe vaovao fito izao no eo am-pananganana isan-karazany ny drafitra sy ny fananganana any Israel:
1. Fiara tariby any Jerosalema
Sahabo ho 85% amin'ireo mpizaha tany any Israel no mitsidika ireo toerana ara-pivavahana malaza ao amin'ny Old City of Jerusalem. Na izany aza, mazàna olana ny fidirana. Miady amin'ny fifamoivoizana ny bus sy ny fiara; tsy ampy ny fijanonana ary mihaona tohatra, mpandrafitra vato ary arabe tery ny mpandeha an-tongotra. Izany no antony tsy nanitatra ny minisitry ny fizahantany Yariv Levin rehefa nilaza izy fa ny tariby tariby efa nomanina “dia hanova ny endrik'i Jerosalema, hanome ny mpizahatany sy ny mpitsidika fidirana mora sy milamina mankany amin'ny Tandrefana Andrefana, ary ho mahasarika fizahan-tany ao aminy zony manokana. ” Tamin'ny volana Mey lasa teo, nankatoavin'ny governemanta ny volavolan-kevitr'i Levin hampiasa vola mitentina 56 tapitrisa dolara amin'ny fananganana làlana misy tariby mirefy 1,400 metatra avy eo amin'ny toeram-pialan-tsasatra First Station eo akaiky eo (manolotra fijanonana sy fitaterana bus be dia be) mankamin'ny Dung Gate, ilay fidirana akaiky indrindra amin'ny Western Wall. Tombanana ho miasa amin'ny 2021, ny fiara tariby dia hijanona amin'ny alàlan'ny Tendrombohitra Oliva, ny Tendrombohitra Ziona ary ny tanànan'i David. Tombanana ho 3,000 XNUMX ny olona azo entina isan'ora amin'ny lafiny iray.
2. Ny lalamby haingana eo anelanelan'ny Tel Aviv sy i Jerosalema
Ity lalamby miavaka ity dia hanova ny fivezivezena eo anelanelan'ny tanàna roa lehibe indrindra amin'ny firenena, hanoloana ny dia 60-kilometatra (37-kilaometatra) ho an'ny adiny iray, na indraindray amin'ny ora hafainganam-pandeha, miaraka amin'ny dia latsaky ny 30 minitra. Ny lalamby haingam-pandeha dia hiasa amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ben-Gurion, gara miisa efatra misy an'i Tel Aviv ary tobim-pitaterana eo akaikin'ny Station Central bus any Jerosalema ary lalamby kely. Isaky ny manomboka mihazakazaka izy, angamba amin'ny faran'ny volana septambra, ny lalamby haingam-pandeha dia hanana lamasinina efatra-décroer isaky ny lalana isaky ny adiny, izay mahazaka mpandeha 1,000 XNUMX eo ho eo.
3. Valan-javaboary jiosy any Dimona
Mandehana mitaingina ny tohatra an'i Jacob's ary mitazà mafy ho an'ny roller coaster an'ny People of the Book - roa amin'ireo 16 mitaingina namboarina ho an'ny Park Pla-im (Park of Wonderness) haorina ao amin'ny tanàna atsimon'i Dimona. Natao dokam-barotra ho toy ny valan-javaboary jiosy mampiroborobo ny soatoavina manerantany, Park Pla-im dia voalaza fa noforonin'i ITEC Entertainment of Florida, izay mamolavola zaridaina lohahevitra iraisampirenena. Ny daty nanombohana dia ny 2023. Ny trano fandraisam-bahiny sy ny kojakoja fizahan-tany hafa dia kasaina hatao eo akaikin'ny valan-javaboary, ary mety hivadika ity tanàna efitra ity any atsimon'i Beersheva sy ny Ranomasina Maty ho manintona. Efa misy hotely mihaja ao an-tanàna, ny Drachim.
4. Seranam-piaramanidina Eilat Ramon
Any amin'ny 18 kilometatra avaratry Eilat no misy, ny seranam-piaramanidina iraisampirenena vaovao 34,000 metatra toradroa dia hisolo ny seranam-piaramanidina Eilat J. Hozman eo afovoan'ny Eilat sy ny seranam-piaramanidina Ovda 60 kilometatra avaratry ny tanàna.
Antenaina fa ny seranam-piaramanidina vaovao - kasaina hisokatra amin'ny fiandohan'ny taona 2019 - dia hitarika mpizahatany an-toerana sy vahiny marobe kokoa.
5. Crusader Wall Promenade
Ny Crusader Wall Promenade, mpizaha tany vao nosokafana tao amin'ny valan-javaboary Caesarea Harbour, dia nitahiry ny fitehirizana sy fanavaozana ny fidirana amoron-dranomasina tamin'ny vanim-potoana romana, rindrina, fiarovana ary tilikambo ary koa ny tsenan'i Crusader. Ny Crusader Wall Promenade dia ampahany amin'ny hetsika fizahan-tany lehibe kokoa ao amin'ny tanàna seranan-tsambo 2,000 taona, izay mirehareha rava arkeolojika maro ary mahasarika mpitsidika antsasaky ny tapitrisa isan-taona.
6. moron-dranomasina biolojika ao Eilat
200 metatra ny halavan'ny morontsiraka eo amin'ny Hoalan'i Eilat mifanila amin'ny Dolphin Reef dia novolavolaina ho toy ny torolàlana momba ny tontolo iainana sy tontolo iainana.
7. Hotely fandraisam-bahiny amin'ny Bedouin
Toeram-pisakafoanana miendrika Bedouin - khans na tranolay any Negev na Galilia - dia malaza amin'ireo mpizahatany manana teti-bola ambany sy mahantra. Ato ho ato dia hisy safidy vaovao amin'ny traikefa fizahan-tany Bedouin any Israel: hotely voalohany eto an-tany amin'ny tanàna Bedouin. Ny trano fandraisam-bahiny misy efitrano kintana 120 misy kintana 4 dia haorina eo am-pototry ny Tendrombohitra Tabara ao amin'ny tanànan'i Shibli-Umm al-Ghanam.